Ciidamada Dowladda iyo AMISOM oo isaga Baxay Deegaanka Halgan Ee Gobolka Hiiraan – STAR FM SOMALIA
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamadii huwanta ahaa ee todobaadkii la soo dhaafay qabsaday deegaankaas ay isaga baxeen.
Deegaanka Halgan ayaa u dhaxeeya magaalooyinka Beledweyn iyo Buulo Burde, waxaana ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ka qabsadeen dagaalyahanada Al-Shabaab.
Odayaasha deegaanka ayaa sheegay in Ciidamada Itoobiya ay ku wargeliyeen inay deegaanka ka baxayaan, kuna wajahan yihiin deegaanada howdka ee Al-Shabaab ku sugan yihiin.
Sidoo kale Odayaasha ayaa walaac ka muujiyay ka bixitaanka deegaankaas ee ciidamada huwanta, waxaana deegaankaas ka qaxay dadkii deegaanka ee ku sugnaa.
Dhinaca kale war goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen deegaanka Halgan.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii ciidamada huwanta ay dagaal kula wareegeen deegaanka Halgan oo ku yaalla wadada laamiga ee u dhaxeeya Beledweyn iyo Buulo Burde.